UBoucher usola ukukhathala kumaProteas
UKUNGASITHOLI isikhathi esanele sokuphumula ngaphambi kokuqala ukudlala ne-Ireland kube nomthelela ekutheni amaProteas aqale ngegiya eliphansi, ngokusho komqeqeshi uMark Boucher.
AmaProteas adle iWest Indies ngo 2-0 kuma-test ngenyanga edlule, anqoba ngo 3-2 kwi-T20 ekuqaleni kukaJulayi, nokubuyise ithemba lokuthi aseshaya ngonyawo olusha emva kokuhluwa ePakistan ekuqaleni kwalo nyaka.
NgoLwesihlanu ashaye i-Ireland ngama-run angu-70 kowesithathu wosuku olulodwa, uchungechunge lwaphela zibambene ngo 1-1. Umdlalo wokuqala waphazanyiswa imvula, owesibili wanqotshwa yi-Ireland ngama-run angu-43.
"Kumele sithole izizathu ezenze ukuthi singadlali ngendlela ebesiyilindele. Kungenzeka ukuthi asisitholanga isikhathi esanele sokuhlukanisa imidlalo yase-West Indies nale esiyidlala ne-Ireland," kusho uBoucher.
"Esikhathini esiningi kuyaye kube nesikhala sesonto noma amabili ukuze abadlali baphumuze imiqondo nemizimba kancane. Asibanga nalo lelo thuba. Sithe siqeda ukuwina eWest Indies sabe sesipakisha sibheke e-Ireland."
UBoucher uthe nezigameko zodlame eziqubuke kuleli zibathintile abadlali ngenxa yokuthi bebekhathazekile ngemindeni yabo, izihlobo, abangani nezwe lonkana.
"Ziningi izinto ezenze ukuthi wehle umdlandla. Singakubala nalokhu okwenzekayo eNingizimu Afrika. Kusithintile futhi kungenzeka ukuthi esinye sezizathu ezenze ukuthi sibuye sidideke enkundleni," kuqhuba uBoucher.
"Imiqondo ibingekho kahle emdlalweni ngesikhathhi sihlulwa kowesibili kodwa sikhulumile salungisa amaphutha. Asiqondile ukubeka izaba, siyazi ukuthi simele izwe futhi kufanele sizimisele kuyo yonke imidlalo."
Noma kungelula ukudlala isikhathi eside ekuhambeni, futhi kungekho ukukhululeka ngenxa yemigomo ye-Covid 19, uBoucher uthe bayazama ukubaphumuza imiqondo abadlali ngezindlela ezehlukene.
"Kunzima njengoba sivalelekile ngoba kuyasiza ukuthi abadlali bashaywe umoya kancane. Kunendawo esiyitholile ebhishi la kuvumelekile ukuthi balule izinyawo khona, kodwa ebusuku kuphela," kuqhuba uBoucher.
"Ikhona nendawo yokudlala igalofu esinemvume yokuyisebenzisa, futhi siyahlangana njalo sixoxe ukuze bonke bakhiphe okungaphakathi, bangayivaleli imicabango nemizwa yabo."
AmaProteas asezoqala isonto lokugcina e-Ireland, azodlala imidlalo emithathu ye-T20. Owokuqala unamuhla ngo-5 ntambama eMalahide Cricket Ground, owesibili ungoLwesine, owokugcina ungoMgqibelo.
Le midlalo imqoka njengoba isondela iNdebe yoMhlaba ye-T20 ezoqala ngo-Okthoba e-United Arab Emirates nase-Oman.
NgoLwesihlanu i-International Cricket Council iwaqhathile amaqembu azodlala kweyokuhlunga, nalawo asengenile emqhudelwaneni omkhulu.
Kweyokuhlunga kuqhathwe iSri Lanka, Ireland, Netherlands ne-Namibia eqoqweni lokuqala, kwafakwa iBangladesh, Scotland, Papua New Guinea ne-Oman kwelesibili.
Emaqenjini asengenile esigabeni esiphezulu kwiNdebe yoMhlaba, esibizwa ngeSuper 12, amaProteas azobhekana ne-England, i-Australia neWest Indies eqoqweni lokuqala. Bazojoyinwa amaqembu amabili azoqhamuka kweyokuhlunga.
Iqoqo lesibili nalo liqukethe izingqungqulu njengoba kuqhathwe i-India, Pakistan, New Zealand neAfghanistan. Nakhona kusazongena amaqembu amabili azokwenza kahle kweyokuhlunga.